Isisekelo esihle sokuhamba ngebhayisikili, ukuhamba ngezinyawo nokubuka inkanyezi - I-Airbnb
Isisekelo esihle sokuhamba ngebhayisikili, ukuhamba ngezinyawo nokubuka inkanyezi
Isle of Wight, England, i-United Kingdom
I-i-guesthouse ephelele ibungazwe ngu-Jenny
U-Jenny Ungumbungazi ovelele
Ifakwe enhliziyweni yendawo yobuhle bemvelo obuvelele, iFircones iyindlu yamaholide ethokomele, eyakhelwe inhloso ebukeka phezu kwepulazi elihle elibheke eHoy Monument. Ukushayela iDemo kwezinye iziqhingi amabhishi amangalisayo.
Ngekamelo lokulala elinethezekile elinombhede ophindwe kabili kanye nemibhede engamawele ekamelweni lesibili, i-Fircones ilungele imindeni, abagibeli bamabhayisikili, abahamba ngezinyawo nanoma ubani ojabulela ukubalekela ezweni.
Ukushayela okufushane ukuya eVentnor, Amanzi Ahlanzekile naseNewport.
I-Fircones itholakala ohlangothini oluseningizimu yesiqhingi esizungezwe ukuhamba kwasemaphandleni kuzo zonke izinhlangothi. Joyina i-Chale Trail esuka lapha ekuthatha uhambe amakhilomitha ayisithupha uzungeza isifunda sase-Chale uthathe phezulu kwezwe kanye namawa. Kunganjani uthathe ikhefu cishe uhhafu wokujikeleza e-The White Mouse Inn ukuze uthole okuphuzwayo futhi mhlawumbe nesidlo sasemini.
Ukushayela okufushane kuzokuyisa e-Ventnor enezitolo zayo nezindawo zokudlela ngasolwandle. KuneMakethe Yezwe ngoMgqibelo ekuseni ethengisa imikhiqizo yasendaweni nemisebenzi yezandla.
Futhi kuyindawo ekahle yokuhlola i-Island ngebhayisikili emigwaqweni nasemathrekhi wamabhayisikili.
Kukhona nethuba lokubuka kancane inkanyezi (ukuvumela isimo sezulu) ngenqubomgomo yokungcoliswa kokukhanya okuphansi kwendawo.
4.98 · 192 okushiwo abanye
Kunama-pubs amaningana ngaphakathi kwedrayivu emfushane. Konke okuphakela ukudla okuhle.
Kukhona nesitolo sezinhlanzi ezimanzi e-Ventnor lapho 'ukudoba' kulethwa khona futhi ungakuphekela khona nama-chips ozowathatha.
Uhambo olufushane olusuka e-Fircones yi-Chale Green Store lapho ungathola khona uhla oluhle lokuhlinzekwa futhi banekhefi enikezela ngeziphuzo ezilula. (Isitolo kanye nekhefi ngeshwa okwamanje kuvaliwe.)
I am married to Pete who is a sem-retired landscape gardener and we have 2 small friendly dogs (not in property that we rent). Our 4 children are all grown up and we have 4 lovely grand-children. We love walking and being outside, reading and music.
We also love meeting people so having people to stay in our let is turning out to be very enjoyable.
Sihlala eduze ne-Fircones futhi sizotholakala isikhathi esiningi uma unemibuzo noma udinga noma yiluphi usizo ngesikhathi uhlala.
Ngicela ungangabazi ukubuza.